Maamulka Premier League oo shaaciyay xilliga la billaabi doono horyaalka xilli ciyaareedka soo socda ee 2020/21 – Gool FM
Haaruun May 27, 2020
(London) 27 Maajo 2020. Maamulka horyaalka Ingiriiska ayaa ogeysiiyay kooxaha ka ciyaara Premier League in fasal ciyaareedka 2020/21 uu billaaban doono toddobaadka labaad ee bisha Sebteembar, iyadoo dood dheeraad ah oo ku saabsan qorshahaasi lagu laaban doono maalinta khamiista.
Waxaa hadda muuqata ifafaalo wanaagsan oo muujineysa in la dhammeystiri karo xilli ciyaareedkan iyadoo qorshaha dib u billaabista la gudo gali doono bisha soo aaddan.
Wax walba waxay ku xirnaan doonaan in maamulka Premier League ay ku guuleystaan in xill ciyaareedkan si guul leh loo dhammeeyo bisha Luulyo.
Balse wali waxaa jira xaalado coronavirus ah oo laga helay tiro ciyaartoy iyo shaqaale-kooxeed isugu jira, taasoo sabab u noqon karta inuu dib u dhac kale yimmaado.
Sidaas darteed, waxaa laga soo xiganayaa Daily Mail in xilli ciyaareedkan la joojin doono guud ahaan haddii uu dhammeystirkiisa madaxa la galo bisha Sebteembar.
Xilli maamulka Premier League uu ku howlan yahay dhammeystirka xilli ciyaareedkan 2019-20, misena waxay go’aansadeen inay ka fikiraan qorshaha qaybta dambe ee sanadkan tii oo ay jirto inay culeys badan oo dhanka jadwaleynta ah wajahi doonaan.
Iyadoo wali aanan la go’aamin sida xilli ciyaareedka lagu gaba gabeyn doono haddii la ciyaari waayo, haddana waxaa jira soo jeedinno kala duwan sida in la joojiyo horyaalka iyadoo wax walba la baabi’in doono ama in horyaalka la soo af jaro iyadoo xilli ciyaareedka lagu go’aamin doono dhibcaha ay shaqeysteen kooxaha kulankiiba.
Kooxaha ayaa diyaar u ah inay ciyaaraan inta ka harsan xilli ciyaareedkan haddii ay suuro gal noqoto, waxaa sidoo kale la rajeynayaa in madasha Khamiista ay miro dhal noqoto iyadoo la wajahayo wajiga labaad ee dib u bilaabista kaasoo oggolaanaya in tababarka ay halkii mar ka qayb qaadan karaan 10 ciyaaryahn iyo shaqaalaha kooxda.
si kastaba ha ahaatee, waxaa sidoo kale aanan wali hubanti ahayn qorshaha UEFA ay ku dhammeystireyso tartamada Europa League iyo Champions League oo la filayo inay fiinaalladooda qabsoomaan 26-ka Agoosto iyo 29-ka Agoosto, inkastoo aysan wali caddeyn xilliga tartamadaas dib loo billaabi doono.
Kooxaha Manchester City iyo Chelsea ayaa ciyaaraya Champions League, halka Manchester United iyo Wolves iyaguna ay qayb ka yihiin kooxaha ciyaaraya Europa League.
Arthur Melo oo ku wargaliyay kooxda Juventus go'aankiisa ugu dambeeya